တောင်ဖလော်ရီဒါရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်၍ ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပြီး၊ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » အဆိုပါတောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များရုန်းကန် Continues ပြီးတော့တစ်ဦးက Recovery ကိုတွေလိုပဲဖျော့တော့နေပါတယ်ရန် Continues
အောင်မြင်မှုဆယ်စုနှစ်များစွာရှိနေသော်လည်းဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း, နှင့်တောင်ဖလော်ရီဒါအတွက်အထူးသဖြင့်မရှိပြန်လည်နာလန်ထူရှိစေခြင်းငှါအရာကနေခဲယဉ်းကြိမ်ပေါ်ကိုပြိုလဲခဲ့သည်။ အပါအဝင်ဖလော်ရီဒါအတွက်ပစ်ခတ်ခဲ့ဘဲလျက်အလွန်ကြီးစွာသောရုပ်ရှင်, ရာပေါင်းများစွာနေသော်လည်း Scarface, Donnie Brasco, သမုဒ္ဒရာရဲ့ဆယျ့နှစျ နှင့် အက်ဒွပ် Scissorhandsဒီမှာရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းကအနည်းငယ်အဖြေတွေကိုရှိသည်ဖို့ပုံများစွာကိုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှကဲ့သို့သောကြီးမားအတိတ်အာရုံ၏မှောင်မိုက်အရိပ်အတွက်၎င်း၏ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးဆောင်ခဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ရှာဖွေနေ မိုင်ယာမီဒု,့Dexter နှင့် သတိပြုပါ Burn အောင်မြင်မှုမရှိအာမခံချက်နှင့်အတူရှည်လျားခက်ခဲကြမ်းတမ်းရုန်းကန်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ တောင်မှနေဆဲတောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အတွက်ရိုက်ကူးဖြစ်ကြောင်းအနည်းငယ်တက်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်စွန့်ခွာရန်ပြင်ဆင်နေကြသည်။
အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံအဘို့ဤရာသီရဲ့အော်စကာဆုရှင်နောက်ကွယ်မှဦးနှောက်တွန်းကန်အား, လရောင်အထူးသဖြင့်, သူတို့သည်အခြားနေရာများတွင်ရိုက်ကူးဖို့ရှေးခယျြခဲ့သူတို့ကပိုက်ဆံကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုကယ်တင်ပြီမယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းမိုင်ယာမီအတွက်ရိုက်ကူးလိုသောကျော်အများကြီးအပူကိုယူ Los Angeles မြို့ သို့မဟုတ်ဂျော်ဂျီယာ၌တည်၏။ ကောင်းမွန်သောဟောင်းနေ့ရက်ကာလအဘို့, ကတောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာအလုပ်လုပ်အများအပြားအဘို့, အဲဒီအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ခဲ့ပုံရသည်။
ဘင် Kanegson Netflix နှင့် HBO နှစ်ခုရုပ်မြင်သံကြားပြသဘဏ်ဍာပေါ်တွင်အလုပ်တက်အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကသူတစ်ဦးသက်တမ်းကြာကင်မရာနှင့်ကရိန်းအော်ပရေတာဖြစ်တယ်, သူကဆိုသည်အဖြစ်ကိုသူတကယ်ဖလော်ရီဒါမိမိကိုမိမိအဘို့အဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင်မဆိုအလင်းကိုမမွငျပါဘူးပြောပါတယ် "မိုင်ယာမီ၌ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းရဲ့သောအရာတစျခုမှာငါပြည်နယ်အတွက်ရိုက်ကူးရဲ့နောက်ဆုံးအရှိုးအလုပ်လုပ်, ဒီမှာအစိုင်အခဲအလုပ်၏ခုနစ်ခုထက်ပိုရက်သတ္တပတ်များဖြစ်ပါတယ်။ ဤအရာကားလိုင်း၏အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောသားတို့တွင်အစကားလက်ဆုံ၏အမှတ် 1 ခေါင်းစဉ်ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြန်နှင့်ထွက်ခြိနျးကိုသွားအဖြစ် '' သင်သည်အဘယ်မှာမှရွေ့လျားနေကြသနည်း '' ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးကအများကြီးပြီးသားဂျော်ဂျီယာမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုချီတက်ကြပါပြီ။ သင်ပြုသောအလုပျအတှကျဝယ်လိုအားရှိမယ့်အခါသင်၏လယ်ပြင်၌ထရွှေ့ဖို့အခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်။ "
အဆိုပါပြဿနာကိုဖလော်ရီဒါနှင့်အထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်, ရိုးရှင်းစွာအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ကွာမိုင်ယာမီနှင့်သော့ချက်များထံမှရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း drawing ကြောင်းအလွန်ကြီးမားသောအခွန်မက်လုံးနှငျ့ ပတျသကျ. တိုင်းပြည်ကတခြားဒေသများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ တကယ်တော့, ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ဖလော်ရီဒါရဲ့တစ်ချိန်ကပေါများအခွန်မက်လုံးပေးရန်ပုံငွေပိုက်ဆံထဲကအထဲသို့ပြေး ဝင်. နှင့်ဘဏ္ဍာနိုင်ငံရေးသမားတွေအားဖြင့် refilled ကြပြီမဟုတ်။ အဆိုပါနိုင်ငံရေးသမားများ 300 အတွက် $ 2010 သန်းရန်ပုံငွေထူထောင်ပြီးငါးနှစ်တွင်အစီအစဉ်အဘို့နောက်ဆုံးမှထင်ပေမယ့်ပိုက်ဆံတကယ်မယ့်သုံးနှစ်အတွင်းအခြောက်အထဲသို့ပြေး ဝင်. ခဲ့သည်။
1994-1996 အကြားအချိန်ကာလမှာကျောဟယ်, အဆုံးမှအစအဦးထံမှမိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့နှင့်တောင်ဖလော်ရီဒါန်းကျင်ပစ်ခတ်ပေမယ့်ကနေဒါ, ဒီရာစုအစောပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်အလေးအနက်ထားဖို့စတင်ခဲ့ကြောင်းမကြာမီလည်းညှိုးနွမ်းဖို့စတင်ခဲ့ကြသည်ဟု 15 feature ကိုရုပ်ရှင်ရှိခဲ့ တောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရိုးရှင်းစွာအတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘူးကြောင်းမက်လုံးပေးနှင့်အတူရုပ်သံနှင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများတရားရုံးကို။ အမြားအပွားကိုအဓိကဘဏ်ဍာမြောက်ဘက်နယ်စပ်ပြေးသောအခါ, များစွာသောပြည်နယ်များအလေးအနက်ထားအစပြုလုပ်ဆောင်ပြန်လည်ယူရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်အခွန်မက်လုံးရေးသားဖို့စတင်ပေမယ့်နေရာတိုင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့မထားပါဘူး။
အဆိုပါဖလော်ရီဒါနိုင်ငံရေးသမားများတောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အတွက်ရိုက်ကူးခြင်းငှါလာကြတဲ့သူထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတွေဟာငွေကြေးပေးအပ်မည်လိမ့်မည်ဟုမက်လုံးပေးအစီအစဉ်၏အချို့သောမျိုးကိုအတူတူထားရန် scramble မှစတင်နေကြသည်။ အဘယ်အရာကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါ, သို့သော်နီးပါး 5,000 စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များဖြစ်ကြပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေနီးပါး $ 250 သန်း။ အဆိုပါပြဿနာကနိုင်ငံရေးသမားတွေဂျော်ဂျီယာကဲ့သို့သောပြည်နယ်များနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်ကိုအတူတကွမက်လုံးပေး packages များမထားနိုင်ပါလျှင်, တောင်ဖလော်ရီဒါအတွက်ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းမှာအားလုံး recover ဖွယ်ရှိမဟုတ်ကြောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါဂယက်ထပျံ့နှံ့ဆက်လက်နှင့်ဒိုမီနိုနေရာတိုင်းကျဆင်းလျက်ရှိသည်။ ခုနှစ်မှစ. ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်း, left အရှိဆုံးအပိုင်းသည်, တစ်ဦးအသက်မွေးမှုအဘို့သူတို့အားစက်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ်မှီခိုအများအပြားအသက်မွေးဝမ်းနှင့်ကုမ္ပဏီများ, ဆုံးရှုံးမှုဝေဒနာကိုခံစားနေကြလျက်ရှိသည်။ သူတို့ရိုးရိုးတော့ဘူးစက်မှုလုပ်ငန်းချွတ်တဲ့လူနေမှုလုပ်မရနိုငျသောကွောငျ့ဤကဲ့သို့သောလြှပျစစျနှင့်လက်သမားအဖြစ်အတော်များများပညာရှင်များထွက်ခွာနေကြသည်။ ၏မကြာသေးမီအောင်မြင်မှုနေသော်လည်း လရောင်, တောင်ဖလော်ရီဒါစာရင်းဇယားဖှယျဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အခွန်မက်လုံးငွေကိုထုတ်ကို run ထားပြီးကတည်းက non-profit အဖွဲ့အစည်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖလော်ရီဒါ, ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်အတွင်းကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်, ဖလော်ရီဒါကြီးမားတဲ့ဘဏ္ဍာရေးထိခိုက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ, ဖလော်ရီဒါရဲ့ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအဲဒီနောက်ဆုံးသုံးနှစ်များတွင် 650 ဟိုတယ်အခန်းပေါင်းဗလာကျန်ရစ်နှင့်သဘောပေါက်ဘယ်တော့မှခဲ့ကွောငျးနီးပါး $ 100,000 ဘီလီယံအနေနဲ့ခြုံငုံစီးပွားရေးအပေါ်တွင်လည်းသက်ရောက်မှုကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရစီမံကိန်းများတွင်ကျော် $2သန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
သူမကပြောသည်အဖြစ် Miami Herald များအတွက်ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေး, Rene Rodriguez သည်ပုံဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင်တစ်ဦးအလင်း၏တာကိုမမွငျပါဘူး, အရမ်းများစွာသောလူဝေးရွှေ့ပြီးတာနဲ့ "အရပျ၌မကျန်အခြေခံအဆောက်အအုံလည်းမရှိ။ သငျသညျမိုင်ယာမီ၌သင်တို့၏ရုပ်ရှင်လာများနှင့်ပစ်ချင်လျှင်ပင်ဒါ, သငျသညျဘယ်သူမှသင်ကကူညီမျှမကျန်ကြွင်းရဲ့နိုင်ဘူးလို့ပဲ။ "
ယခင်: အီတလီဖြန့်ဖြူးအဖြစ်ပွင့်လင်းအသံလွှင့်စနစ်များရက်ချိန်း video signal
နောက်တစ်ခု: Cinépolisသီးသန့်သူ့ရဲ့Cinépolis KLIC တိုက်ရိုက် OTT ဝန်ဆောင်မှုပါဝါမှ Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများရွေးချယ်